Qurbajoogta Jarmalka Oo La kulmay Hay’ada Dhakhatirta Dalkasi+Sawiro – SBC
Qurbajoogta Jarmalka Oo La kulmay Hay’ada Dhakhatirta Dalkasi+Sawiro
Wefdi ka socda Jaaliyada Qurbajoogta Puntland ee dalka Jarmalka (PDF Germany) ayaa 10.07.2015 magaalada Bonn ee caasimadii hore ee dalka Jarmalka kula kulmay madaxda ugu saraysa Hay’ada Dhakhaatiirta Jarmalka.
Kulankan oo ay Jaaliyada uga qayb galeen gudoomiyaha PDF Germany Eng. Maxamed Cabdiraxman Cali iyo Dr. Cabdiqani Maxamed Maxamud ayaa nuxurkiisu ahaa sidii labada Hay’adood uga wada tashan lahaayeen, sida ugu haboon ee wax looga qaban lahaa baahida caafimaad ee ka jirta guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan gobolada Puntland.
Kulankan oo ka dhacay xarunta Hay’ada Dhakhaatiirta Jarmalka ee Bonn ayaa la isku afgartay in Hay’ada Dhakhaatiirtu dhawaan ka fuliso Puntland Mashaariic wax looga qabanayo arimaha Caafimaadka, sida Mashruuc kor loogu qaadayo aqoonta Dhakhaatiirta Puntland.
Gudoomiyaha Jaaliyada Puntlland ee dalka Jarmalka Eng. Maxamed C/raxmaan Cali oo la hadlay warbaahinta ayaa uga mahad celiyay Ha’yada Dhakhaatiirta Jarmalka balan qaadkeeda, isagoo sheegay in Mashruucani yahay mid macne wayn ugu fadhiya shacabka iyo Dhakhaatiirta Soomaaliyeed.
Daawo Muuqaal iyo sawirro: